बधाई सुपारी स्पा - दयालु र न्यानो
अगस्ट 29 मा हरेक वर्ष, अर्थोडक्स मसीहीहरूले हाम्रो मुक्तिदाता को दिन मनाउन। यो एक धेरै ठूलो र revered छुट्टी हो। पौराणिक कथा अनुसार, छवि Iisus Hristos आफ्नै अनुहार सखाप पछि कपडा मा अंकित। पर्व लोकप्रिय मकई सुपारी रूपमा ज्ञात वा सुरक्षित छ। यो दिन सबै मसीहीहरूलाई पवित्र छ। एकदम अक्सर हामी निष्कपट बधाई सुपारी स्पा सुन्न। मान्छे सबै राम्रो आकांक्षाओं र प्रयासहरूलाई पूरा प्रत्येक अन्य कार्यान्वयन कदर सपना इच्छा। बधाई सुपारी स्पा पनि समावेश स्वास्थ्य, को लागि इच्छा प्रभु परमेश्वर र आफ्नो छिमेकीको लागि आनन्द र महान् प्रेम। शब्द, यो हाम्रो हृदय र प्राण न्यानो, न्यानो, दयालु शब्दहरू छ।
बधाई सुपारी स्पा - शान्ति, आनन्द र समुन्नतिको इच्छा
त्यसैले, यो दिन सबै अर्थोडक्स मसीहीहरूले मनाउन। बधाई सुपारी स्पा परिवारमा, राम्रो-गर्दा अनि आनन्द मा स्वास्थ्य, दीर्घायु, आनन्द लागि इच्छा समावेश गर्दछ। आफ्नो दैनिक सान्त्वना, स्नेह र हरेक घर को राम्रो-जा इच्छा भूल छैन। बस प्रत्येक अन्य हेरचाह, वफादारी र प्रेम दिन। तिनीहरूलाई सबै खराब विचार जानुहोस् र मेरो हृदयमा शान्ति र शान्त हुनेछ गरौं!
ओखर ख्रीष्टको शरद ऋतु र गर्मी मौसम को सीमा मा मनाइन्छ। उहाँले सबैभन्दा "स्वादिष्ट" बिदा थियो किनभने। यो क्षेत्रहरू र वनको उदार उपहार संग, नयाँ बाली को मिति संग सम्बन्धित छ। बधाई सुपारी स्पा को अन्त मा उच्चारण गर्ने Dormition फास्ट। तिनीहरूले नियम, एक प्रतीकात्मक जलपान रूपमा, सँगसँगै छन्। यो एक नट sorbet र अन्य नाश्ता, जो अखरोट वा वन पागल समावेश हुन सक्छ। नयाँ बाली को आवरण डाटा फल, तिनीहरूले हुर्किसकेका थिए जहाँ क्षेत्रमा मनमोहक छ। खाना आफ्नो प्रयोग, लोकप्रिय विश्वास अनुसार, यो शरीर र प्राण लागि benevolent र निको मानिन्छ। यो अक्सर बदाम, बादाम, काजू र अन्य विदेशी फल पर्याप्त पवित्र पार्ने भए तापनि। तर यो जो थियो, परिवार आवश्यक पागल सँगै बधाई संग व्यवहार गर्छन्। यो बिरामी र दीनदुःखी गर्न आउँछ विशेष गरी जब। यो पागल को एक ठूलो संख्या वितरण गर्ने व्यक्ति, भविष्यमा पक्षमा प्राप्त गर्नेछ भन्ने विश्वास गरिन्छ।
कविता प्रेमीहरूको लागि
तपाईं कवितात्मक पदहरू एक प्रशंसक हुनुहुन्छ भने, यो पनि अधिक रोचक र उज्ज्वल प्रियजनहरूलाई बधाई गर्न उपयुक्त हुन्छ। यो सजिलो छ। तपाईं विभिन्न साहित्यिक स्रोतहरू मा बधाई सुपारी स्पा कविता मा फेला पार्न, वा तपाईँको आफ्नै संग आउन सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, यी रेखाहरू आफ्नो प्रियजनलाई खुसी पार्न निश्चित हो:
गर्मी बित्दै। ख्रीष्टको आउँछ।
म नातेदार बधाई गर्न hasten, तपाईं!
उत्सव अनुग्रह गरौं
यो तपाईं सबै शक्ति लिन मद्दत गर्छ।
सहभागिता तपाईंलाई हतार,
फोहर को, falsehood खडा गर्नेछु
ओखर astringency मत,
ख्रीष्टको सबै कुराको लागि धन्यवाद दिन।
मुक्तिको हामीलाई तेस्रो समय ल्याउन।
तपाईं अब कठोरता हुन
पश्चात्ताप गर्न र एक पटक फेरि मामला लाग्न,
स्वस्थ, बलियो र हरेस छैन। हुन
उहाँले तेस्रो मुक्तिदाता, तपाईं पुकारा हुनेछ छ,
र let गरेको अनुग्रह तुरुन्तै तपाईंलाई आउनेछ।
स्थान को प्रतिमा अघि मैनबत्ती,
आफ्नो बिदा को शत्रुहरूमाथि रिसले।
गद्य र आफ्नो प्रियजनलाई कृपया सुपारी स्पा गर्न शुभकामना। बस राम्रो शब्द भन्नुहोस्। बच तेस्रो, उज्ज्वल र धनी तिनीहरूलाई बधाई। उहाँले ख्रीष्टको पवित्र अंकित छोयो जब Edessa Abgar, शहर को राजा संग रूपमा भयो तिनीहरूलाई इच्छा परिवार सबै पीडित को निको। यो कलाकार हननिया, मुक्तिदाता को एक पोर्ट्रेट रंग गर्न निराशाजनक संग भयो रूपमा, सबै प्रयासहरूलाई परमेश्वरको सफल पूरा मदत छ गरौं, तर उहाँले एक तौलिया ख्रीष्टको छवि को रूप मा एक अद्भुत उपहार प्राप्त गरेपछि स्नातक। नजिक धन, आनन्द, प्रेम, राम्रो गर्मी इच्छा। छोटो मा, हृदय देखि अभिवादन जो कोहीले indifferent व्यक्ति छोड्न छैन।
कसरी समुद्री डाकू शैली मा एक बच्चाको जन्मदिन संगठित
आफ्नै हातले इस्टर कार्ड
विवाह उत्सव लागि भोज हल बनाउने
जुलाई 10 - दिन सैन्य महिमा को!
जंगल बिरालो - आफ्नो घर मा एक predator
प्रकृति को अचम्मको चमत्कार: Accommodation लातविया Accommodation गुफा
चीन डेमोग्राफिक नीति। चीन जनसंख्या
आफ्नै हातले एक विवाह को लागि कार सजावट
मातृभाषा कसरी दर्ता गर्ने? प्रक्रियाको विशेषताहरू
Poluvalmovaya छत: फोटो, रेखाचित्र, एक संरचना एकाइ। आफ्नो हातले poluvalmovaya छत कसरी?
हप बाल: उपयोगी व्यञ्जनहरु र contraindications
आफ्नो हातले लिफाफें को निर्माण
पीडित - युद्ध को शिकार ..., राजनीतिक दमन